android ဖုန်းများအတွက် APK ကို FireChat | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » FireChat
FireChat APK ကို
FireChat chat ဖို့နည်းလမ်းသစ်ကိုမိတ်ဆက်: "Off-the-ဇယားကွက်" ။
အခုဆိုရင်သင်န်းကျင်ကလူတွေနဲ့ chat နိုင် - မပါအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းဖုန်းလွှမ်းခြုံလည်းမရှိလျှင်ပင်။
FireChat အများပြည်သူဆက်သွယ်ရေးများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်သတိပြုပါ။ ဒါဟာပုဂ္ဂလိကဆက်သွယ်ရေးရည်ရွယ်ခြင်းမရှိပါ။ ရီးရဲလ်အမည်များကိုမလိုအပ်ပါ။ သငျသညျကလောင်အမည်ကိုရှေးခယျြနိုငျသညျ။ chatrooms များတွင်သတင်းအချက်အလက်မျှဝေတဲ့အခါမှာပိုင်းခြားသိမြင်မှုလေ့ကျင့်ခန်းပါ။ အခြားလူ (ရုံ tweets နှင့်အတူကဲ့သို့), သင့် username နှင့်အပြည့်အဝနာမကိုအမှီသင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုဖတ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
'' firechats ': FireChat ဆက်သွယ်ရေးအမျိုးအစားအသစ်တစ်မျိုးနိုင်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနှင့်အမည်မသိအများပြည်သူ chatrooms တစ်ပြိုင်နက်အဖြစ်အများအပြား 10,000 အဖြစ်ကလူကိုစုသိမ်းနိုင်ပါတယ်။
သင်အနေနဲ့သူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာကိုမဆိုအကြောင်းကို join ဖို့မည်သူမဆိုအဘို့သင့်ကိုယ်ပိုင်အများပြည်သူ '' firechats '' ဖနျတီးနိုငျ - ကနယူးယော့ကီး, Thrones ၏ဂိမ်း, Legends ၏အဖွဲ့ချုပ်သို့မဟုတ်အီတလီအစားအစာရဲ့ရှိမရှိ။
သင်ရိုင်းများတွင်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဖျော်ဖြေပွဲမှာစခန်းချနေတဲ့ကြီးမားတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ကုန်သွယ်မှုပြပွဲမှာကမ်းခြေပေါ်တွင်သို့မဟုတ်မြေအောက်ရထားထဲမှာနေ, ဒါမှမဟုတ်ပင်ပြည်ပမှာခရီးသွားလာပဲဖြစ်ဖြစ်, ရိုးရိုးမိတ်ဆွေတစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးနှင့်အတူ app ကိုဖွင့်သည်မီးနှင့်အခြားသူကိုထွက်ရှာတွေ့ ရှိလား။
FireChat Get နှင့်အတူတူလူတွေဆောင်ခဲ့စတင်ပါ။
တွစ်တာ @OpenGarden နဲ့ Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုဖြည့်ဆည်းပေးပါ: facebook.com/OpenGarden ။
မကြာမှီကပြောင်းလဲမှုများကျွန်တော်တို့ကို FireChat တိုးတက်စေခြင်းနှင့်ထောက်ခံမှုရရှိရန်ကူညီ: forum.opengarden.com
•သင့်တည်နေရာ 200 ပေထ, Off-the-ဇယားကွက်ဆက်သွယ်ရေးများအတွက် "အနီးတဝိုက်ရှိ" mode ကိုအသုံးပြုပါ,
အကွာအဝေးအတွင်းတစ်ဦး device ကိုအင်တာနက် access ကိုရှိပါတယ်လျှင်• Off-the-ဇယားကွက်ဆက်သွယ်ရေးအွန်လိုင်း shared စေခြင်းငှါ,
• Multihop စွမ်းရည် peer-to-peer ဆက်သွယ်ရေး၏အကွာအဝေးတိုးချဲ့,
•, လူတွေက "လူတိုင်း" mode မှာအကြောင်းကိုအားလုံးတိုင်းပြည်အတွက်ကျော်စကားပြောနေကြသည်သောအရာကိုကြည့်ရှုပါ
•သောင်းချီတစ်ပြိုင်နက်သုံးစွဲသူထောင်ပေါင်းများစွာ၏အထိနှင့်အတူတိုက်ရိုက်အများပြည်သူဆွေးနွေးမှုများအဘို့သင့်ကိုယ်ပိုင် '' firechats '' Create
•သင်စိတ်ဝင်စားစေခြင်းငှါသည့်အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်တည်ဆဲ '' firechat '' လူတွေကိုဆက်သွယ်ပါသို့မဟုတ်ဖိတ်ခေါ်
အနီးအနားမှာပိုမိုမြန်ဆန်အလုပ်လုပ်နှင့် Bluetooth LE ရံ mode ကိုအတူလျော့နည်းပါဝါသုံးလို့ရတယ်! က Android developer များသင်ဤကိစ္စကိုသရုပ်ဆောင်ကခငျြအသိပေးပေးပါ: code.google.com/p/android/issues/detail?id=59693
Android နှင့်5/ Lollipop အသုံးပြုသူများအတွက်, သူတို့ကထည့်သွင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့သည့်ဘလူးတုသ် LE ရံ mode ကိုထောက်ခံမှု fix သူတို့ကိုပြောပြကျေးဇူးပြုပြီး: code.google.com/p/android-developer-preview/issues/detail?id=1570
Omegle Download ...